‘Swabhiman’ Shooting Report – Nepali Movies
‘Swabhiman’ Shooting Report
The 47 year old Rajesh Hamal is the lead actor in “Swabhiman,”ascene of which was being shot atagravel crusher in Jadibuti, Kathmandu. The local in the area were excited to see the ‘Hero’ in the area. The 18th movie of the director, Madan Ghimire, in his film career revolves around Rajesh Hamal. Read more in Nepali below:
आमाहरू नानी बोकेरै दौडिए, यात्रुहरू रोकिए, मजदुर कामै छाडेर ओइरिए । तिनका आँखाको नानीमा एउटै मान्छेको तस्बिर देखियो । तिनको ओठमा एउटै मान्छेको नाम सुनियो ।
‘उः राजेश हमाल,’ स्कुले नानीहरूले अनौठो उल्लासका साथ औंला तेस्र्याए । सँधै सिनेमाको पर्दामा देखिने नायक त्यस क्षण आँखाअघि भेटिँदाको खुसीले दर्शकका अनुहार उज्यालिएको थियो । आखिर के छ राजेश हमालमा, जो सँधै भीड तान्ने क्षमता राख्छन् ? हालै ‘४७औं जन्मोत्सव’ मनाएका यी ‘कुमार नायक’ लाई यसको उत्तर दिने फुर्सद र इच्छा दुवै थिएन । सिनेमाको सुटिङ टुंग्याउनु जो थियो ।
वेस्ट कोट र सुरुवालमा देखिएका राजेश बिहीबार टन्टलापुर घाममा जडिबुटी छेउको क्रसर उद्योगमा पसिना काढ्दै उभिइरहेका थिए । उनको पछाडि गिट्टीको रास थियो र अघिल्तिर ढुंगैढुंगा । त्यहीवरपर क्यामेरा घुमिरह्यो । उनी हात हल्लाईहल्लाई कड्की नै रहे ।
‘यो एउटा क्रसर उद्योगको दृश्य हो,’ राजेश त्यहाँ आउनाको कारणबारे उनका निर्देशकले प्रस्ट्याए, ‘जहाँ राजेश केही झोक्किएझैं गरी बोल्नुपर्छ ।’
उनी थिए- मदन घिमिरे र सिनेमा थियो- ‘स्वाभिमान’ २०५० मा ‘आमाको माया’ बाट निर्देशन थालेका घिमिरेको यो अठारौं सिनेमा हो, जसको कथा पनि उनैले लेखेका छन् ।
कविता घिमिरे (मदनपत्नी) र रामकेशर बोगटीले बनाउन लागेको यो ‘स्वाभिमान’ मा राजेशको चरित्र खलनायकको र स्वभाव नायकको छ । उनकै वरिपरि कथा घुमेको छ । र, नाम पनि उनकै चरित्रअनुसार जुरेको छ ।
सिनेमामा राजेश रक्सी पिउँछन्, मारपिट गर्छन् र नृत्यशालाकी युवतीको प्रेममा चुर्लुम्मै डुब्छन् । तर पनि उनमा एउटा स्वाभिमान छ र त्यो भंग हुन नदिन ज्यानै पनि दिन बेर लाउँदैनन् ।
प्यास, प्यास, प्यासै देख्छु, सबको नजरमा,
पाइन्छ पाइँदैन मैले खोजेको जस्तै दिल, यो बजारमा…
‘डान्स बार’ की केटी राजेशको ‘स्वाभिमान’ मा भुतुक्कै हुन्छे र उदात्त भएर नाचिदिन्छे ।
‘देश बनाउँछु भन्ने नेताहरू जीवनमा फटाहा सावित भएका छन् र तिनले देशलाई ढाँटेका छन्,’ सिनेमाबारे घिमिरेले भने, ‘तर अनेक परिबन्दमा परेर गुण्डागर्दी गर्नेहरूमा पनि देशको माया देखिएको छ । स्वाभिमानमा समयले बिगारेका तिनै मान्छेको स्वाभिमान देखाउन खोजेको छु ।’
छायांकनको लगभग सबै पाटो पूरा गरेको स्वाभिमानको अब खिच्न बाँकी एउटा गीतको दृश्य मात्रै हो । त्यसपछि यो प्राविधिक मिश्रणको प्रक्रियामा जानेछ र त्यसपछि तिहारमा मोफसलबाट रिलिज गर्ने मदनको योजना छ । यसमा सुमन सिंह, झरना थापा, सौजन्य सुब्बा, रामकेशर बोगटी, मुकुन्द थापा, हिउँवाला गौतम, रवीन्द्र खड्का, उमेश खड्का, रवि गिरीलाई देख्न पाइनेछ ।
महेश खड्काको संगीतमा राजेशपायल राई, अञ्जु पन्त, दीपक लिम्बू, प्रविशा अधिकारीले स्वर दिएका छन् । यसमा कृष्णहरि बराल, दिनेश अधिकारी र महेश आफैंले पनि शब्द भरेका छन् । (साभार – कान्तिपुर)
Posted by maha at 5:41 am	Tagged with: Madan Ghimire, Rajesh Hamal, Swabhiman
One Response to “‘Swabhiman’ Shooting Report”
Naked Nepali Actors Prakriti Giri sings in ‘Batomuni ko Ful’